Alpine Fauna: Anmụ anụmanụ Switzerland, gịnị ka ị ga-ahụ? | Akụkọ Njem
Alpine Fauna: immụ anụmanụ Switzerland
Maria José Roldan | | Ebe njegharị, Getaways Europe, Nduzi
Ugwu Alps bu nke kachasi na ohia na Europe, mana o bu ebe omenala di na mbu kemgbe oge gara aga (taa enwere ihe ruru nde mmadu iri na ano no obodo ma ihe dika ndi mmadu 14 nde kwa afo). Ma ọ dị mkpa iburu n'uche na nguzozi nke obibi na ọdịbendị na-emebi emebi Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Switzerland iji mara ya ma ọ bụ nwee anụ ọhịa ya, ị gaghị akpaghasị anụ ọhịa, ọkachasị n'oge mgbede na chi ọbụbọ n'ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka ụmụ anụmanụ na-eri nri.
Na mgbakwunye ịkwesịrị ilekọta gburugburu ebe obibi anya nke ọma nke mere na ma anụmanụ ma ọdịdị na-ọma-echebe. Kwesiri iji ezi uche mee ihe, mana ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịchọpụta ụkpụrụ na nke ugbu a nke ogige ntụrụndụ mba, ihe okike na mpaghara ndị ọzọ echedoro iji nwee omume ọma na nke ugwu. Ma mgbe m gwachara gị ihe a niile, ọ ga-amasị m ịkọrọ gị gbasara otu akụkụ nke m hụrụ n'anya: gbasara osisi alpine na anụmanụ ndị bi na Switzerland.
1 Anụmanụ Alpine na ahịhịa
2 Alpine anụmanụ ndị na-eri anụ
2.1 Roe mgbada
2.3 Ewu ọhịa
2.4 Nkịta ọhịa
2.6 Oke bekee
2.7 Agba aja agba
3 Anu anumanu nke anumanu alpine
4 Animals nwere anụmanụ ndị dị ize ndụ n’elu ugwu Alps?
4.1 Anụ ole na ole
4.2 Agakwala ha nso
4.3 White nkịta
4.4 E nwere oria nkita na nkịta, nkịta ọhịa na ụsụ
4.5 Agwo ojoo
4.6 Obere anụmanụ: akọrọ
Anụmanụ Alpine na ahịhịa
You maara na otu n'ime ihe ndị kachasị dị egwu banyere Switzerland bụ ọdịdị ya, nke nwere oke osisi na ahịhịa ugwu. Nke ahụ bụ otú o si dị, Switzerland ugbu a nwere njem nleta na gburugburu ebe obibi iji chekwaa osisi na ụmụ anụmanụ ya, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ụdị ụmụ amaala a na-eyi egwu n'ihi mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ na ị bụ anụmanụ hụrụ n'anya, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ọ bụrụ na ị ga-anwa ịga njem na ime obodo ụfọdụ nke Switzerland ị ga-enwe ike ịchọta anụ ọhịa ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma. Examplesfọdụ ihe atụ ndị ị nwere ike ịchọta bụ ndị a dika umu anumanu.
Alpine anụmanụ ndị na-eri anụ
Roe deer, otu ụdị dị ka obere ele Ọ na-agagharị n'enweghị nsogbu n'okporo ụzọ Switzerland, n'ihi ya ọ dị mfe ịhụ ma anyị na-anya ụgbọala.
Anyị ga-enwe ohere iji hụ chamois, ụfọdụ anụmanụ dị nnọọ mma, yiri nne mgbada na ụdị usoro ugwu ugwu.
Nwetụla mgbe ị hụrụ ewu ọhịa na-eduzi ma na-eduzi ya? Na Switzerland ọ ga-ekwe omume ịhụ ka ha na-agabiga ọkachasị ke ikpehe snow ye obot obot ikpehe.
Ije ije n’ime ime obodo Switzerland pụtara nzukọ nkịta ọhịa na-enweghị isi. Mma ya mara mma ma ghara ịhapụ gị
Alpine òké dị ka marmots, weere ndị kasị ibu na Europe, na nke a pụrụ ịhụ karịsịa n'oge oge ọkọchị.
N'etiti ụmụ anụmanụ Switzerland anyị na-ahụkwa agile na skittish hares. Ọ bụ ezie na n'efu ga-esi nnọọ ike ịhụ n’ihi na ha na-ebu ọnụ ma na-atụ ndị mmadụ egwu.
Agba aja agba
Nwekwara ike izute nnukwu anụ ọhịa bea na-acha odo odo ma na-eri anụ, bụ ndị ekwere na ha adịghịzi kemgbe 1904, agbanyeghị ihe na-erughị afọ 5 gara aga ọ dị ka ha amụwo ọzọ.
Anu anumanu nke anumanu alpine
Cannwekwara ike ịchọta nnụnụ, nnụnụ pụrụ iche nke ị gaghị echefu n'echiche gị. Offọdụ n'ime ndị ị nwere ike ịchọta bụ:
N'ime ha ka anyị nwere ike ịchọta nnụnụ na-eri anụ oriri, nke a maara dị ka ugo, nke na-akwụ akwụ n'elu ugwu ndị kachasị elu na mba ahụ. Obi abụọ adịghị ya, ịhụ ka ha na-efe ka ọ bụ ihe omume n'ihi nku ha Ha ruru ihe dịkarịa ala na mita 2 ma ọ dịkarịa ala.
N'ime ụdị ndị ọzọ enwere ike ihu site na njem nlegharị anya anyị na-ahụ vultures, crows na crows. N'ikpeazụ anyị na-agwa gị na osimiri Switzerland bụ ebe azụ dị ka azụ na kwa Enwere ike ịchọta ihe nākpu akpu.
Animals nwere anụmanụ ndị dị ize ndụ n’elu ugwu Alps?
Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịga n'okporo ụzọ ịga ije ma ọ bụ ịbanye n'ime ebe ndị na-echeghị nche, ị kwesịrị ịma na enwere nnukwu anụ ọhịa na Alps. Ndị buru ibu ndị yiri anụ na-alọghachi n'ugwu Alps Ndị Europe mgbe emechapụrụ kpamkpam na narị afọ nke XNUMX.
Anụ ole na ole
Dịka ọmụmaatụ, anụ ọhịa bekee nke ọwụwa anyanwụ Alps, anụ ọhịa wolf nke ọdịda anyanwụ Alps, lynxes ... mana ọ bụ ezie na ha dị ha adịghị n'ọtụtụ ebe ọ bụ na ihe atụ, e nwere ihe na-erughị anụ ọhịa wolf 50 na anụ ọhịa bea. Enwere ihe karịrị 100 lynxes guzobere na ha ga-ezonahụ onye ọ bụla.
Agakwala ha nso
Mana ọbụlagodi na ụmụ anụmanụ chọrọ ịhapụ gị ma ọ bụ na ị hụghị ha n'ihi na ha na-ezo, ọ dị mkpa ka ị ghara ịnwa ịbịaru anụ ọhịa nso (ọ bụghị ewu ugwu, chamois, marmots, wdg) n'ihi na ọ dịghịrị ha mma na ị ga-asọpụrụ na ha nọ na ebe obibi ha, onye ọbịa bụ gị, ọ bụghị ha. May nwere ike ịhụ ụfọdụ ehi ọhịa ma ọ ga-abụ na ha ga-adọrọ mmasị gị, mana ị ga-anọrịrị anya.
E nwere nkịta ọcha a na-azụ iji chebe ìgwè atụrụ site na nkịta ndị kpafuru akpafu ma ọ bụ nkịta ọhịa. Ma nkịta ọcha nwere ike iwe iwe ma ọ bụrụ na ị kpebie ịgakwuru igwe atụrụ., ya mere ọ ga-adị mkpa ịmegharị ụzọ iji zere ha emekwala ka atụrụ tụọ ụjọ, nọrọ jụụ ma ghara iyi nkịta egwu n'ụzọ ọ bụla n'ihi na ọ nwere ike ịdị egwu.
E nwere oria nkita na nkịta, nkịta ọhịa na ụsụ
Ọrịa dị n'etiti anụmanụ nke Switzerland, ọkachasị na nkịta, nkịta ọhịa na ụsụ, ọ bụ ezie na ha bụ ndị dịpụrụ adịpụ n'ezie. Mana ọ bụrụ na nkịta ataa gị ị ga-achọ enyemaka ahụike ozugbo enwere ike.
E nwere ụdị agwọ abụọ na-egbu egbu na Alps: aspic na peliad vipers, ha na-amata ha site na ha ellipticals na ha vetikal udi. Ma agwọ ha na-awakpo nanị ma ọ bụrụ na ha eyie egwu ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-eju ha anya, yabụ ị ga-ele anya nke ọma ebe ị na-azọ ụkwụ tupu ị nọdụ ala ma ọ bụ na mpaghara okwute. Ọ bụrụ na otu n’ime agwọ ndị a taa gị, ị kwesịrị ịga ozigbo maka enyemaka ahụike, n ’ihi na-agbanyeghị na ọnweghị ihe egwu ọnwụ maka ndị okenye, ndị ọrụ ahụike ga-ewepụ ma ọ bụ nyocha ya.
Obere anụmanụ: akọrọ
Ikwesiri iburu n'uche na enwere umu anumanu ndi ozo di iche iche i kwesiri iburu n'uche: akọrọ. Fọdụ n'ime akọrọ ndị a na-ebu ọrịa ndị dị ka ọrịa Lyme (borreliosis). Ikwesiri inyocha ahụ gị kwa abalị mgbe ị gwụchara ụkwụ ma wepụ ihe ọ bụla ị hụrụ. Ọ bụrụ na ọ na-adị nkọ ma ọ bụ na-enwu ọkụ, ị ga-ahụ dọkịta gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Alpine Fauna: immụ anụmanụ Switzerland
Ọdụm Ihi ụra, na-agba mmiri na Galapagos Islands
Oke oyi: ezumike ezumike na Norway